I-Anaphylaxis - Ipulatifomu Yesiguli Yesiyaluyalu Yomhlaba Wonke Nomoya
AnaphylaxisIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-07-01T13:20:40+02:00
I-Anaphylaxis ukusabela okweqile kokugula okwenzeka empilweni. Kungenzeka ngemuva kwemizuzwana noma imizuzu yokuchayeka entweni oyiqabele. Izenzo ezivame kakhulu ze-anaphylactic yilezi ukudla, ukulunywa yizinambuzane futhi kunemithi noma amaphilisi.
Uma uxabana nento ethile, amasosha akho omzimba asabela ngokweqile kulesi sifo ngokukhipha amakhemikhali abangela izimpawu zokungezwani komzimba. Imvamisa, lezi zimpawu ezikhathazayo zenzeka endaweni eyodwa yomzimba. Kodwa-ke, abanye abantu bathambekele ekuphenduleni okungathí sina kakhulu kwe-anaphylactic. Lokhu kusabela kuthinta ingxenye engaphezu kweyodwa yomzimba ngasikhathi sinye. Isikhukhula samakhemikhali akhishwa amasosha akho omzimba ngesikhathi se-anaphylaxis singakwenza ukuthi uthuke; umfutho wegazi lakho wehla kungazelelwe nemigwaqo yakho yomoya iba mincane, ivimbele ukuphefumula okuvamile.
Izimpawu nezimpawu ze-anaphylaxis zingenzeka ngaphakathi kwemizuzwana noma imizuzu yokuchayeka entweni oyiphikisayo:
Ukusabela kwesikhumba, kufaka phakathi isifuba kanye nokulunywa
Isikhumba esigcwele noma esikhanyayo
Ukuzwa kwesigaxa emphinjeni wakho
Ukuphefumula, ukuphefumula okuncane, ukuqina komphimbo, ukukhwehlela, izwi elihoshozelayo, ubuhlungu besifuba / ukuqina, inkinga yokugwinya, umlomo / umphimbo onukayo, ukuminyana kwamakhala / ukuminyana
I-pulse ebuthakathaka futhi esheshayo
Isicanucanu, ukuhlanza noma isifo sohudo
Izimpawu eziyingozi kakhulu umfutho wegazi ophansi, ubunzima bokuphefumula nokulahlekelwa ukwazi, konke lokho kungabulala. Uma unanoma iyiphi yalezi zimpawu, ikakhulukazi ngemuva kokudla, ukuthatha imithi noma ukulunywa yizinambuzane, funa usizo lwezokwelashwa ngokushesha. UNGALINDI !!!!!
I-Anaphylaxis idinga ukwelashwa ngokushesha, kufaka phakathi umjovo we-adrenalin bese ulandela ukuhlolwa kwezokwelapha egumbini lezimo eziphuthumayo esibhedlela.
Noma ikuphi ukudla kungadala ukusabela okweqile. Ukudla okubangela iningi le-anaphylaxis namantongomane, amantongomane ezihlahla (njenge-walnut, i-cashew, i-nut yaseBrazil), i-shellfish, inhlanzi, ubisi, amaqanda kanye nezinto zokuvikela.
Ubuhlungu bezinambuzane ezivela kuzinyosi zezinyosi, iminyovu noma amajakhethi aphuzi, izinyoni kanye nezintuthwane zomlilo kungadala ukusabela okunzima futhi okubulalayo kwabanye abantu.
Imithi ejwayelekile edala i-anaphylaxis yimithi elwa namagciwane (njenge-penicillin) nemithi elwa nokuquleka. Imikhiqizo ethile yegazi neyegazi, odayi be-radiocontrast, imithi yezinhlungu nezinye izidakamizwa nakho kungadala ukusabela okunamandla.
Izimbangela ezingavamile kakhulu
Natural I-latex imikhiqizo iqukethe izinto ezingezwani komzimba ezingadala ukusabela kubantu ababucayi.
Kuyivelakancane kakhulu, ukuzivocavoca umzimba kungadala i-anaphylaxis. Kwezinye izimo kubonakala ngemuva kokudla ukudla okuthile ngaphambi kokuzivocavoca umzimba.
Uma une-allergies noma i-asthma futhi unomlando womndeni we-anaphylaxis, ingozi yakho iphakeme. Ngisho noma wena noma ingane yakho ninokuphendula okuncane kwe-anaphylactic esikhathini esidlule, kusengcupheni yokuthola i-anaphylaxis ebucayi.
Udokotela wakho uzokubuza imibuzo mayelana nokungezwani komzimba nomzimba wakho noma ikuphi ukusabela okweqile okwedlule oke waba nakho:
Ukuthi noma yikuphi ukudla okuthile kubonakala kungadala ukusabela
Ukuthi ukulunywa okuvela kunoma yiluphi uhlobo lwesinambuzane kubonakala kudala izimpawu zakho
Noma imiphi imithi oyiphuzayo, futhi uma imithi ethile ibonakala ixhunyaniswe nezimpawu zakho
Noma ngabe uke waba nezimpawu zokungezwani komzimba lapho isikhumba sakho sesivezwe ku-latex
Ngemuva kwalokho ungahlolwa ukungezwani komzimba nokuhlolwa kwesikhumba noma ukuhlolwa kwegazi futhi udokotela wakho futhi angakucela ukuthi ugcine uhlu olunemininingwane yalokho okudlayo noma uyeke ukudla ukudla okuthile okwesikhashana
Ezinye izimo njengezimbangela zezimpawu zakho kufanele zikhishwe, njenge:
I-Mastocytosis, isifo sokuzivikela komzimba
Izimo ezingezwani neze nezibangela izimpawu zesikhumba
Izinkinga zenhliziyo noma zamaphaphu
Ngesikhathi sokuphendula okunzima kwe-anaphylactic, iqembu lezokwelapha eliphuthumayo lingenza ukuvuselelwa kwe-cardiopulmonary uma uyeka ukuphefumula noma inhliziyo yakho iyeka ukushaya. Bazokunikeza imithi:
I-Epinephrine (adrenaline) ukunciphisa ukusabela okweqile komzimba wakho
Ama-antihistamine ne-cortisone (emithanjeni) ukunciphisa ukuvuvukala kwamagatsha omoya wakho nokwenza ngcono ukuphefumula
I-beta-agonist (isb. Albuterol / salbutomol) ukuqeda izimpawu zokuphefumula
Uma usengozini ye-anaphylaxis i-allergenist yakho ingahle ikunikeze i-epinephrine / adrenaline ejojelwa emzimbeni. Le divayisi ("Ipeni") yisirinji ehlanganisiwe nenaliti efihliwe ejova umthamo owodwa we-epinephrine / adrenaline lapho icindezelwe ethangeni lakho. Qiniseka ukuthi uyaqonda ukuthi uyisebenzisa kanjani futhi nini. Futhi, qiniseka ukuthi abantu osondelene kakhulu nawe (umndeni, osebenza nabo, abaqashi kanye nabasebenzi besikole) bayakwazi ukusebenzisa ipeni le-adrenaline, mhlawumbe omunye wabo angasindisa impilo yakho. Gcwalisa njalo umuthi kadokotela lapho uphelelwa isikhathi. Azikho izimo ezikhethekile zokugcina. Ungayivumeli iqhume (0 ° C). Lapho undiza: Ungahle uphathe ipeni elisesikhwameni sakho. Abasebenzi bezokuphepha nabezindiza kungenzeka bangakwazi lokhu, ngakho-ke cela udokotela wakho ukuthi akunikeze isitifiketi sokuhamba esisayiniwe. Lo muthi ("Ipeni") kufanele uphathwe nawe ngaso sonke isikhathi.
Kwezinye izimo, i-allergenist yakho ingaphakamisa izindlela ezithile zokwelashwa, njenge-immunotherapy (i-allergies shots) ukunciphisa ukuphendula komzimba komzimba wakho ekulunyweni yizinambuzane. I-Immunotherapy, eyaziwa nangokuthi ukungafuni ukukhuthazwa komzimba noma ukuzizwa ungcono kakhulu kuyindlela yokwelashwa engcono kakhulu kubantu abaphikisana nezinambuzane ezilumayo njengoba inganciphisa ingozi yokuphendula okunzima esikhathini esizayo ibe ngaphansi kuka-5%. I-venom immunotherapy inikezwa ngendlela yesibhamu, futhi iziguli ezingaba ngu-80 kuya ku-90% ezikuthola iminyaka emi-3 kuya kwengu-5 azinakho ukusabela okunzima esitinyeni esizayo.
Yini ongayenza ukuvimbela ukuhlaselwa esikhathini esizayo?
Kwezinye izimo eziningi ayikho indlela yokwelapha isimo somzimba sokuzivikela esingaphansi esingaholela ku-anaphylaxis.
Gwema izimbangela zakho zokungezwani komzimba ngangokunokwenzeka
Uma unikezwe ngudokotela wakho, phatha i-epinephrine / adrenaline Pen oziphathela yona njalo nawe. Ngesikhathi sokuhlaselwa kwe-anaphylactic, ungazinikeza umuthi usebenzisa iPeni (isb.EpiPen, Jext, Emerade).
Uma uzwa izimpawu, ungalindi, sebenzisa ipeni.
Udokotela wakho futhi angancoma ukuthatha amaphilisi e-corticosteroid kanye / noma ama-antihistamine.
Kuzo zonke izimo ungakhohlwa ukushayela inombolo ephuthumayo bese ucela usizo.